MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward မြန်ဆန်သက်သာပြီး စိတ်ချယုံကြည်ရသည့် MPT ဒုံးပျံအိမ်သုံးဖိုင်ဘာအင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုကို တပ်ဆင်ခ အခမဲ့နှင့် (၁)လစာ အခမဲ့ ပါဝင်မည့် သီတင်းကျွတ်အကြို ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကို မြို့နယ်ပေါင်း ၇၀ တွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပြီ - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
မြန်ဆန်သက်သာပြီး စိတ်ချယုံကြည်ရသည့် MPT ဒုံးပျံအိမ်သုံးဖိုင်ဘာအင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုကို တပ်ဆင်ခ အခမဲ့နှင့် (၁)လစာ အခမဲ့ ပါဝင်မည့် သီတင်းကျွတ်အကြို ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကို မြို့နယ်ပေါင်း ၇၀ တွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပြီ
(ရန်ကုန်၊၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊အောက်တိုဘာလ၂၆ရက်)- မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးနှင့် ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာဖြစ်သည့် MPT သည် သုံးစွဲသူများအတွက် မြန်ဆန်သက်သာပြီး စိတ်ချယုံကြည်ရသည့် မြန်နှုန်းမြင့် ဒုံးပျံအိမ်သုံးဖိုင်ဘာ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းရှိ မြို့နယ်ပေါင်း ၇၀ အထိ ထပ်မံတိုးချဲ့ လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ ထို့အပြင် ဒုံးပျံအိမ်သုံး ဖိုင်ဘာအင်တာနက်ကို အောက်တိုဘာလအတွင်း တပ်ဆင်ပါက သီတင်းကျွတ်အကြို ပရိုမိုးရှင်းအနေဖြင့် နိုဝင်ဘာလအတွက် (၁) လစာ အခမဲ့အသုံးပြုခွင့်ကို ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
MPT အနေဖြင့် ဒုံးပျံအိမ်သုံးဖိုင်ဘာအင်တာနက်ကို မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ တိုးချဲ့ဖြန့်ကျက်လျက်ရှိပြီး အောက်တိုဘာလအတွင်း တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ထားသော မြို့နယ်များကို အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သည့် နေရာအသေးစိတ်ကိုလည်း https://bit.ly/34gWfyD တွင် ကြည့်ရှု စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
မိုဘိုင်းလ် ဖုန်းနံပါတ် (၁) ခုစီအတွက် ရရှိမည့် အကျိုးအမြတ်များ
၃၉,၀၀၀ Max. 25 Mbps 1 GB မိနစ် ၁၀၀ အကန့်အသတ်မရှိပေးပို့နိုင်
၆၉,၀၀၀ Max. 50 Mbps2GB မိနစ် ၁၀၀ အကန့်အသတ်မရှိပေးပို့နိုင်
၁၀၉,၀၀၀ Max.100 Mbps3GB မိနစ် ၂၀၀ အကန့်အသတ်မရှိပေးပို့နိုင်
“အခုလို ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကူးစက်မှုမြင့်မားလာတဲ့ကာလမှာ အိမ်မှာနေပြီး အလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူတွေ အတွက်သာမက အွန်လိုင်းသင်တန်းတက်နေရတဲ့သူတွေ ၊ မြန်နှုန်းမြင့် ဂိမ်းတွေကို အွန်လိုင်းကနေ အကန့်အသတ်မဲ့ ဆော့ကစားလိုသူတွေနဲ့ သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်တွေမှာ အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် live show ဖျော်ဖြေပွဲတွေကို ကြည့်ရှုပြီးအနားယူအပန်းဖြေသူတွေအတွက် မြန်ဆန် သက်သာပြီး စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ မြန်နှုန်းမြင့် MPT ဒုံးပျံအိမ်သုံးဖိုင်ဘာအင်တာနက်ကို အထူးနှုန်းထားတွေနဲ့အတူ သီတင်းကျွတ်အကြို ပရိုမိုးရှင်း အစီအစဥ်ကိုပါ ထပ်မံပြီး မိတ်ဆက်ခွင့်ရတဲ့ အတွက်အထူး ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ သီတင်းကျွတ်ကာလမှာ အားလုံးပဲ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ လို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်” ဟု MPT-KSGM JO ၏ စီးပွားရေးဌာနကြီးမှ ဒုတိယအရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ ဦးကိုကိုအောင်က ပြောကြားခဲ့သည်။